Kuboshwe ababili ngokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni | News24
Kuboshwe ababili ngokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni
Cape Town – Kuboshwe abasolwa ababili ngoLwesihlanu ekuseni ngokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni kanye nezinhlamvu eHermanus.
Okhulumela amaphoyisa uCaptain FC Van Wyk uthe amaphoyisa ophiko oluhlanganisa olwase-Overberg lwe-Crime Intelligence, olwaseMaitland lwe-Flying Squad kanye neNational Intervention Unit aseshe imizi ekuGousblom Street eMount Pleasant, eHermanus.
Uthe khona lapho amaphoyisa abophe abasolwa ababili abatholakale nezibhamu ezimbili ezingekho emthethweni kanye nezinhlamvu.
“Amaphoyisa alandele imininingwane, abe eseyosesha imizi. Kuthe esasesha, kwatholakala isibhamu sohlobo lwe-357 Magnum kowesilisa oneminyaka engu-34 ubudala obezihlalele ngaphandle komoto. Uzothweswa icala lokuphatha isibhamu zingekho zincwadi zaso,” esho.
OLUNYE UDABA: Akekho ongakhali ngowaKwaMashu okutholakale entanta edamini
UVan Wyk uthe amaphoyisa aphinde athola i-shotgun ophahleni lwendlu kwelinye lamagumbi omuzi.
“Ngokuhamba kwesikhathi kutholakale ukuthi i-shotgun le kwabikwa ukuthi yebiwe eCaledon. Amaphoyisa aphinde athola insangu kanye ne-Tik,” kusho uVan Wyk.
“Kuboshwe owesilisa oneminyaka engu-39 ubudala ngaleli cala, kanti uzothweswa elokutholakala nezibhamu angenazo izincwadi zaso kanye nezidakamizwa.”